Ahoana no ahafahanao maneho hevitra momba ny backlinks amin'ny alàlan'ny SERP?
Azo inoana fa naheno fampahalalana mahatsiravina ianao momba ny fananganana antontan-kevitra momba ny fanamarihana sy ny fanamafisan'io fomba fiasa io. Na dia izany aza dia tiako ianao hanokana fotoana iray ary hanatontosa ity tetikady ity amin'ny saina misokatra. Na eo aza ny laza malaza amin'ity paikady ity, ny fampiasana bilaogy fanehoan-kevitra ho toy ny tetikady bakeraly dia afaka manampy anao hifandray tsara amin'ny mpanjifa mety anao ary hanangana ny marika eo amin'ny tsenanao.Na izany aza, mila manana fomba fanao mahomby amin'ny famoronana rindran-tserasera ianao mba hahazoana vokatra tsara SEO. Raha tsy izany dia ho menatra ianao amin'ny mason'ny fiara fitadiavana ary mety hahazoana sazy ho an'ny teknolojia fananganana spammy aza.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba vaovao ahafahana manangom-bokatra amin'ny fanehoan-kevitra. Azonao atao ny manadino izay efa novakinao teo aloha. Ny fomba ambaranay hizarana aminareo dia tsy mitovy amin'ireo teknolojia fanorenana hafa izay mitaky ny fampiasana dofollow, nofollow, teny fikarohana na zavatra hafa izay renareo.
Ny fomba vaovao ahafahana manohana backlinks
Hodinihintsika izay dingana tokony hanarahanareo mba hahazoana ny valiny momba ny kalitao tsara ao anatin'ny fotoana fohy.
Finday ireo bilaogy tsara
Eo am-piandohan'ny fanentanana fananganana rohy dia mila mahita ny blôgy marina ianao mba hamoronana ny rohy misy anao. Mila mitondra ny fikarohana momba ny varotra anao ianao ary mahita loharanom-baovao ahazoana fifamoivoizana sy fifamindram-po tsara. Tsy miharihary ny mikaroka ny bilaogy indostria tsara indrindra. Raha tokony ho izany, afaka mahita blaogy na forum an'ny PR ianao miaraka amin'ny fanehoan-kevitra mavitrika maro momba izany.
Mba hahitana izay ilainao dia azonao atao ny mametraka fikarohana manokana ao amin'ny Google. Ohatra, raha manompo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny orinasanao, afaka mangataka motera iray ianao amin'ny fikarohana "Bilaogy ara-pahasalamana TOP" na "forum for physicians". "Ho vokany dia hanome lisitry ny blaogy TOP ianao mifototra amin'ny ampahany sosialy sasany ary manamarika ireo bilaogy ireo.
Raha vao nahita fa mety ho an'ny loharanom-baovaon'ny orinasanao ianao dia afaka manohy maneho ny rohy manaraka avy amin'ireo mpaneho hevitra ao amin'ny bilaoginy. Hanampy anao hampitombo ny fototry ny vohikalan'ny namana.
Fikarakarana ny blôginao
Ampiasao RSS amin'ny Google Reader ny fanaraha-maso ny blôgy ao amin'ny orinasa. Mamoron-drakitra hafa ho an'ny tranonkala tsirairay. Hanamafisana io dingana io, dia ho hitanao ny sokajy misy ireo lahatsoratra izay navaozina vao haingana.
Andramo ny ho voalohany
Tsy azo atao ny manangana backlinks fanehoan-kevitra ao amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra mampikorontan-tsaina izay manoratra fotsiny ireo tsikera tsy mitongilana, spammy. Azonao atao ny manome ny voalohany amin'ny famoahana fanehoan-kevitra eo ambanin'ny lahatsoratr'ilay lahatsoratra, fa rehefa avy mamaky tanteraka azy fotsiny izy ary mieritreritra ny valiny mahafa-po sy mahay mandanjalanja. Raha mifandray sy mikarokaroka ny rohinao voalohany, ny mpitsikera hafa dia azo inoana fa hijery azy io mba hanamarinana hoe iza ianao. Izany no antony nahatonga anao ho voalohany, ny fiovana nataonao dia ambony noho ianao raha mankany amin'ny fety taorian'ny fanamarihana maro hafa Source .